Danleey mase diin doon, qadiyad mase qoonsi - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeMaqaaloDanleey mase diin doon, qadiyad mase qoonsi
Waagii baryaba waxbaa cusub. Tobankii sano ee u danbeeyey Soomaaliya waxaa ku hardamayey dad iska soo horjeeda oo ay kuwana sheeganayaan in ay diin iyo dar alle duulaan u yihiin kuwana ay doonayaa dad ay xakumaan iyo doolar ay ku helaan.
Waxaa mar foodda isku diiray laba kooxood oo ay shacabku ugu yeeri jiren kooxda Ashahaado la dirirka iyo Maxkamadaha Islaamiga ah. Dadka intooda badan waxay iska dhaadhiciyeen in ay kooxina aduunyo doonaysay kooxina dhimasho iyo Janno aakhiyo.
Waxaa Maxkamadihii hoggaanka u qabtay Shikkh Shariif oo lagu doortay isagoo daacadnimo lagu tuhmiyey iyo qabiilkiisa oo awood ku lahaa koofurta. Waxaa Idaacadaha iyo warbiihinta kale lagala socon jiray Shiikh shariif oo aad u dhaliila cid kasta oo xiriir la yeelata ama garab siisa dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha shisheeye weliba Shiikh Shariif wuxuu gaalaysiin jiray ciddii falkaasi ku kacda.
Waxaa xigtay inuu Shikkh shariif isu dhiibo keenya oo ah gaaladii uu ka digayey oo uu sidoo sheegi jiray hubka u sitay. Wuxuu noqday nin saaxiib dhow la ah Kenya isagoo hoggaanka u qabtay dowladii uu murtadiinta u yiqiin? Su’aashu waxay ahayd shiikhu ma markiisii hore ayuu been iyo munaafaqad waday mase masalada ayaa ka marin habawday oo diinta ayuu dib ka fahmay?
Intaas waxaa xigay in Maxkamadihii oo u xuubsiibtay Alshabaab ay dhexdooda ka bilaabtay is eedayn iyo qilaaf keenay in ay naftoodii waayaan raggi laf dhabarka u ahaa qaarkood kuwaas oo si kadis ah ay u dileen madaxdii sare ee Alshabaab. Waxaa la is waydiiyey Ibraahim Afqani, Macalin Bulhan iyo aragga kale oo la gawracy waxa ay galabsadeen.
Waxaa kale oo taa xigtay masuuliyiin kale oo Alshabaab ka tirsanaa oo qaatay qorshe ah naftu orod bay kugu aamintaa kadibna iskaga cararay Xisbigaas kuwaas oo ay ka mid ahayeen Shiikh Xasan Daahir Aways iyo Muqtaar Rooboow.
Shiikh Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur wuxuu isu dhiibay dowladdii uu la dagaalamayey oo uu murtidiinta u yiqiin iyo waliba ciidamadii shisheeye ee uu lahaa dalka ayay ku soo duuleen ee ha lagu jihaado.
Shiikhu wuxuu booqday xeryihii Ciidamada Itoobiyaanka waliba isagoo la kulmay saraakiisha Itoobiya kuwaas oo uu la yeeshay shir albaabdu u xirnaayeen. Shiikhu sida la sheegay wuxuu isu diyaarinayay inuu hoggaamiyo ciidan ku duula saaxiibadiisii uu ka soo tegay ee Alshabaab intaas waxaa u dheer isagoo doonaya inuu madax u noqdo dowlad goboleedka koofur galbeed soomaaliya.
Su’aashu waxay tahay shiikhu ma munaafaqad ayay ka ahay shalay markuu dowladda gaalaysiiyey dowladaha deriska ahna uu lahaa dalka ayay ku soo duuleen mase diintii ayuu dib ka soo bartay oo waddo qaldan ayuu hore u hayey, mase markii hore waa uu saxnaa balse hadda ayuu doonayaa inuu diintii kasoo laabto oo uu ridoobo wehelna uu ka dhigto dad uu xakumo iyo doolar uu qaato?
Isku soo duube Soomaaliya waxaa lagu saladay musiibo. Diintu may aha laba nooc, waa mid aan is bedelin, sidaas darted macquul ma aha in ay maalinba fasiraad gooni ah yeelato. Sidoo kale waxay diinta Islaamku si cad uu diidaysa in la dilo cid aan wax galabsan ama lagu xadgudbo uunka Ilaahay. Waxayn diinta ogoshahay in la daafaco oo laga hortago cid kasta oo cadow ku ah diinta islaamka. Soomaaliya madax iyo majo wax isma dhaama ma hayno ilaa iyo hadda wadani u istaaga samata bixinta dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa lama helin.
Total Visits: 128,888